मध्यान्नको एउटा समय, खैरो रङका प्लास्टिकका झोला किचनको मार्बल काउन्टर टेबलमाथि छन्। धेरै सामानको बीचमा प्लास्टिकको एउटा झोला खोतल्दा कालो रङको कपडा मेरो आँखाअघि पर्छ। त्यो टेबलमा कालो कपडाका नजिक…
पहिल्यै भनिहालूँ कि यो आलेखका लेखक नाटक एवं चलचित्र निर्देशक इभान म्याग्रिन–चाग्नोल्यू (Ivan Magrin-Chagnolleau) हुन्। उनको अमेरिकी जिब्रोलाई नेपालीकरण गर्ने काम मात्र तपाईंहरूको नेपाली ठिटो शरदले गरेको हो। मन परेमा…
by सृष्टि आचार्य ११ बैशाख २०७८
म जे भन्दै/लेख्दै छु त्यो भन्न/लेख्न आवश्यक नै नपरेको भए ? अथवा, यही लेख्दै गरेको कुरा सबैको साझा महसुस, साझा आवाज भइदिएको भए ? लेख्न बस्दै गर्दा यही भावनाले छोपेपछि…
सुदूर विकट हिमालको एउटा गाउँमा एक गुमनाम युवती बस्थी । वर्णन गर्नुपर्ने खालको उसमा त्यस्तो कुनै खास विशेषता थिएन । तर उसको एउटा अदभुत् इच्छा थियो । ऊ आफ्नो अनुहार…